Mombamomba ny orinasa - Haus Lighting Limited
Haus Lighting Limited dia natsangana tamin'ny 2013
Niorina tamin'ny 2013 izahay miaraka amin'ny zavamaniry mpanamboatra mihoatra ny 1500 metatra toradroa sy efitrano fampirantiana 200 metatra toradroa, hita ao amin'ny tanàna Zhongshan manan-tantara any Sina. Izahay dia tena mamokatra hazavana haingon-trano anatiny isan-karazany, ao anatin'izany ny chandelier, pendant lamp, chandelier, lampo valiha, jiro amin'ny rindrina, jiro latabatra, jiro gorodona ary jiro ho an'ny fanamboarana miaraka amin'ny safidy fitaovana isan-karazany, toy ny vy, aliminioma, vy vy, varahina, vera, marbra ary misy bebe kokoa.
Ny serivisy OEM sy ODM dia omena sy tohana amin'ny tsipika famokarana 3, tsipika fitsapana fahanterana 1 ary ny setran'ny fanamafisam-peo miisa 1, detector ny famoahana volkano avo lenta ary mifandraika amin'ny milina fanandramana IP, ny jiro rehetra dia feno rehefa avy nanao fanaraha-maso feno sy fitsapana tamin'ny tatitra QC mazava. hiantohana ny jiro miorina amin'ny kalitao avo lenta.
Miaraka amin'ny traikefa manan-karena amin'ny sehatry ny jiro ary manao asa fanondranana mihoatra ny 8 taona, ny vokatra jiro dia be mpampiasa amin'ny trano fandraisam-bahiny, departemanta, trano fonenana, villa sy trano fandraisam-bahiny manerana an'izao tontolo izao ary nahazo laza tsara amin'ny kalitao avo sy maharitra maharitra fanompoana amin'ny ezaka ataontsika.
Mizaha ny taratasy fanamarinana
Ny teny filamatray
Haus Lighting, hazavao izao tontolo izao!
Mba hiantohana ny fahafahan'ny vidin'ny fifaninanana sy ny famolavolana jiro tsara tarehy, ny jiro haus dia manatsara ny fifehezana ny kalitao mandroso, ny fitantanana maoderina ary manana fifandraisana fiaraha-miasa tsara amin'i Epistar, Bridgelux, CREE, Osram, Philip, Lifud, Meanwell ary manome ny mety indrindra vahaolana jiro hahafeno ny fepetra takiana.
Ary maro ny vokatra haingon-trano haingo haingo efa misy fanamarinana CE, mandritra izany fotoana izany, ny singa rehetra dia mifanaraka amin'ny UL, CUL, SAA, Rohs, CB ary mifandraika amin'ny kojakoja voamarina iraisam-pirenena. Miezaka izahay mba ho mpiara-miombon'antoka amin'ny jiro azo itokisana miaraka amina endrika maivana, vidiny avo lenta ary takatry ny vidiny. Ny kalitao sy ny sanda no mitana ny laharam-pahamehana indrindra amin'ny haus lighting!